एक अपाङ्ग वडासदस्य जो लठ्ठीको सहारामा घण्टौं हिडेर वडावासीको सेवा गर्छन् – samyantra.com
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ३०, २०७५ समय: ३:४४:१९
हरि कोइराला, मोरङ । मोरङको लेटाङ नगरपालिका वडा नं. ७ का वडासदस्य आदिमान लिम्बू लठ्ठी कै सहारामा जनप्रतिनिधिको रूपमा वडाबासीको सेवा गर्नुहुन्छ ।
गत सोमबार लेटाङ नगरपालिकाको नगरसभामा भाग लिन उहाँ लठ्ठीको सहारामा ६ घण्टा पैदल हिडेर सभाहलसम्म पुग्नुभयो । पोलियो रोगले देब्रे खुट्टा सुकेपछि उहाँ ८ वर्षको उमेरदेखि अपाङ्ग जीवन ब्यथित गरिरहनु भएको छ । गाडी चलेको बेला उहाँ गाडी मै ओहोर दोहोर गर्नुहुन्छ । तर वर्खामास गाडी चल्दैन । उहाँले भन्नुभयो – ‘गाडी नचलेको बेला ६ घण्टा लगाएर लठ्ठीकै सहारामा आउने गरेको छु । ‘
वडाको पूर्वी गाउँबाट पश्चिमको अर्को गाउँ पुग्न ९ घण्टा लाग्छ । ठाउँ –ठाउँमा सडक बिग्रिएकोले अहिले यातायात ठप्प छ ।
साविकको वारङ्गी गाविस जिल्ला कै सबैभन्दा दुर्गम गाविस मानिथ्यो । राज्य पुर्नँसंरचनाका क्रममा पुरै गाविस लेटाङ नगरपालिकाको ७ नं. वडा भयो । उसै त दुर्गम गाविस । अझ पुरै गाविसलाई वडा बनाएपछि वारङ्गीका जनप्रतिनिधिहरूको दिन चर्या जुम्ला – हुम्लाका गाउँको भन्दा कम पीडादायी छैन ।
हात पाउ चल्नेहरू सजिलै ओहोर दोहोर गर्छन तर आदिमान जस्ता अपाङ्गता भएका जनप्रतिनिधिलाई वडाबासीको काम गर्न निक्कै चुनौति छ । उहाँले भन्नुभयो –वडाबासीले मत दिएर जिताएपछि काम गर्नै प¥यो ।
सातामा दुई तीन पटक नगरपालिका झर्ने काम पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत दिन्छ । हिजो गाविस पुग्दा भत्ता पाइन्थ्यो । अहिले लेटाङ बजारमा रहेका बैंकबाट लिनुपर्छ । उहाँले लेटाङ बजारमा खेलेका बैंकको अपनत्व ग्रहण गर्नु परेकोमा दुख ब्यक्त गर्नुभयो । नाम ,भूगोलले लेटाङका बासिन्दा भयौं तर हाम्रो नियति र दैनिकी बदलिएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ– सबै वडाबासी नगरपालिकाको काममा जानकार छैनन् । त्यसैले सहयोगका लागि पनि नगरपालिका झर्नुपर्छ । हिउँदमा समस्या छैन् , तर वर्खा लागेपछि पहाडी बाटो लौरोको सहारामा आउन –जान कठिन छ ।
सडक त ढिलो चाँडो बन्ला । तर आफ्नै नगरपालिकाको कार्यालय अपाङ्गता मैत्री नभएको उहाँको गुनासो छ । लौरो टेकर सास्ती खेप्दै कार्यालय पुग्यो , कहिले मेयर भेटिनु हुन्न, कहिले प्रशासकीय अधिकृत । लिम्बूले ह्विल चेयरमा आउने अपाङ्गता भएकाहरू झनै समस्यामा रहेको सुनाउनु भयो ।
मोरङ जिल्ला भन्ने बितिकै औषत नेपालीले समथर भूभागको कल्पना गर्छन् । तर, मोरङको झण्डै एक चौथाई भूभाग महाभारत श्रृङ्खला र चुरे क्षेत्रमा पर्छ भन्ने थोरैलाई मात्र थाहा छ । जिल्लाका साविक वारङ्गी,सिंहदेवी,रमितेखोला गाविसमा अझै विद्युत समेेत पुगेको छैन ।
3,589 total views, 130 views today